International News | MoeMaKa Burmese News & Media
Health Care . Gov - အိုဘားမားကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မိုးပေါ်မပျံနိုင်သေး
နယူးယောက်မြို့တော်မှာ လူဖြူရဲက လူမည်းတဦးကို လည်ပင်းချုပ် ဖမ်းဆီးရာမှ သေဆုံးသည့် အမှု မြို့တော်ခုံရုံးက အပြစ်မယူ (နိုင်ငံတကာသာဂိ၊ မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၄ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ လူဖြူရဲတွေက လူမည်းတွေကို ဖမ်းဆီးအရေးယူရာမှာ အကြမ်းဖက်မှု...
Microsoft ဦးဆောင်သူအဖြစ် အိန္ဒိယသား Satya Nadella ကို ခန့်အပ်၊ အိန္ဒိယသားတို့ ၀မ်းမြောက် ဂုဏ်ယူ လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၄ က ကမ္ဘာထိပ်တန်းဆော့ဝဲကုမ္မဏီကြီးဖြစ်တဲ့...
အမေရိကန်၊ ပင်ဆာဗေးနီးယားပြည်နယ်နေ မြန်မာတဦးက ဇနီးဖြစ်သူကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ် 69 News (WFMZ News) က ကူးယူဖော်ပြသည်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၃ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ပင်ဆာဗေးနီးယားပြည်နယ်၊ Bethlehem မြို့နေ...
မဲဆောက် ရွှေ့ပြောင်းပညာရေး – တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအတွက် ဘာသာစုံ ထောက်ကူသင်ကြားပေး
မဲဆောက် ရွှေ့ပြောင်းပညာရေး – တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအတွက် ဘာသာစုံ ထောက်ကူသင်ကြားပေး မောင်ပီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃ မြန်မာအစိုးရ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဖြေဆိုကြမည့် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့နေ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား...
စင်္ကာပူတွင် ကားသမားက လူတိုက်၍ ဆူပူအုံကြွမှုဖြစ် မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၃ စင်္ကာပူ ကျွန်းနိုင်ငံရဲ့ little India (အိန္ဒိယရွာ) လို့ခေါ်တဲ့ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားတို့ ကျက်စားရာ မြို့နယ်မှာ အသက် ၃၃...
ကင်တာကီ၊ ဘိုလင်းဂရင်း၊ စုပေါင်းဘုံကထိန်ပွဲတော် ကျင်းပ မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၃ ကင်တက်ကီပြည်နယ် ဘိုးလင်းဂရင်းမြို့ စတုတ္ထကြီမြောက် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်ကို ဗုဒ္ဓေါဝါဒကျောင်းတွင် ကင်တက်ကီပြည်နယ် ဘိုးလင်းဂရင်း။အိုဝင်ဘိုရို၊ဆီဘရီ၊ဟန်ဒီဆန်စတဲ့ မြို့လေးမြိုမှ မြန်မာပြည်သား တိုင်းရင်းသား ညီကိုမောင်နှများ...
အမေရီလို ဇေယျသုခ တတိယအကြိမ်စုပေါင်းကထိန်ပွဲ ကျင်းပရန် ပြင်ဆင် မိုးမခအထောက်တော် (အမာရီလို)၊ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၃ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တက္ကဆက်ပြည်နယ် အမာရီလိုမြို့့ဇေယျသုခ ဓမ္မရိပ်သာ မြန်မာထေရ၀ါဒ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏ တတိယအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းမဟာ...
အနောက်က ရော်ဘဲ၏ ပြန်စာ – အမျိုးသားလုံခြုံရေး ထိပ်တန်းဦးစားပေးတဲ့ ခေတ်၊ ထောက်လှမ်းရေးခြေလှမ်းများ
အနောက်က ရော်ဘဲ၏ ပြန်စာ – အမျိုးသားလုံခြုံရေး ထိပ်တန်းဦးစားပေးတဲ့ ခေတ်၊ ထောက်လှမ်းရေးခြေလှမ်းများ နိုင်ငံတကာသာဂိ၊ အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၃ အရှေ့အရပ်က ရဲဘော်ဆောင်းလူက အမေရိကန်ပြည် ထောက်လှမ်းရေးရဲ့ အရှုပ်တော်ပုံတွေ ဗူးပေါ်ကုန်တာကို လှမ်းပြီး...
တရုတ်ပြည်၊ ပီကင်းမြို့တော်၊ တင်ယမ်မင်ရင်ပြင်၊ ကားတစီးက လူအများကို ၀င်တိုက်၊ ၅ ဦးသေ၊ ၃၈ ဦး ဒဏ်ရာရ မိုးမခသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ဒေသစံတော်ချိန် မနက်...
ပညာရေးအဆင့်မမီလို့ ဆန်ဖရန်စီးတီးကောလိပ် ဖျက်သိမ်းရဖွယ်ရှိ မိုးမခသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၃ မြန်မာလူငယ်တွေ တက်ရောက်လေ့ရှိတဲ့ ဆန်ဖရန်မြို့တော်က community college (ဒေသကောလိပ်) တခုဖြစ်တဲ့ CCSF – City College of...
Health Care . Gov – အိုဘားမားကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မိုးပေါ်မပျံနိုင်သေး
အိုဘားမားကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မိုးပေါ်မပျံနိုင်သေး မိုးမခသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာ ၁ က စတင်သက်ဝင်တဲ့ အိုဘားမားရဲ့ သက်သာချောင်ချိသော စောင့်ရှောက်မှုဥပဒေ (Obama’s Affordable Care Act) အရ...
ဥက္ကလံ၊ ဓမ္မဧရိပ် သီတင်းကျွတ်ပွဲ ဆင်နွဲ ကျော်နိုင်၊ မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၃ (အောက်တိုဘာ ၁၉ ၊ စနေနေ့) ယနေ့ အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့က ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာ၊ ဥက္ကလံမြိုရှိ...
အာဖရိကတိုက်က အာဏာလွှဲသူအတွက် စံပြခေါင်းဆောင်ဆု မပေးနိုင်တာ ၂ နှစ်ရှိပြီ မိုးမခသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၃ ဆူဒန်နိုင်ငံက တယ်လီဖုံးလုပ်ငန်းရှင် ဘီလျံနာသူဌေးကြီး အီဘရာဟင်က ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကစပြီး “အာဖရိကခေါင်းဆောင်မှု စံပြဆု” ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။...
ရီပတ်ဘလင်ကန်အောက်လွှတ်တော် ကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရ အခုထိ ဘတ်ဂျက်မရှိ၊ အကြွေးမချေးနိုင်သေး မိုးမခသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ (အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ)၊ အောက်တိုဘာ ၁၇၊ အစိုးရရဲ့ ငွေချေးခွင့် သတ်မှတ်ချက် (Debt...
နိုင်ငံမအုပ်ချုပ်သော ဗီယက်နမ်စစ်ဗိုလ်ချုပ် ကွယ်လွန် ၀တ်မှုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ ကျနော်ငယ်စဉ်က ဗီယက်နမ်စစ်တပ်ကို အလွန်လေးစားခဲ့သည်။ ၁၉၇၀နောက်ပိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံဗဟိုပြုသော အမေရိကန်လေတပ်၊ မရိန်းတပ်များမှ ဘီ၅၂လေယာဉ်ကြီးများဖြင့် မြောက်ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်များကို တဝုန်းဝုန်းဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်နေသည့်ကြားမှ နောက်ဆုံး အမေရိကန်ကန်တပ်များ ၁၉၇၅တွင်...
ရီပတ်ဘလစ်ကန်အောက်လွှတ်တော်က အစိုးရငွေချေးခွင့် တိုးမြှင့်ပေးမည်ဟု ဆိုပြန် မိုးမခသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ အောက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာ ၁၂၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ၊ နေ့ခင်းက အောက်လွှတ်တော် လူများစုပါတီ ရီပတ်ဘလစ်ကန်အမတ် ခေါင်းဆောင်အုပ်စု ၁၈ဦးက အိမ်ဖြူတော်မှာ ဒီမိုကရက်သမ္မတ...
အမေရိကန်အစိုးရ ရပ်ဆိုင်းမှု အောက်လွှတ်တော်မဲ ၂၁၇နဲ့ ကျော်လွှားနိုင်ဟု သတင်းများကဆို မိုးမခသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၃ သီတင်း ၁ပတ်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ အစိုးရဘတ်ဂျက်ချမပေးတဲ့ လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရ အကြပ်အတည်းကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေ တစိတ်တပိုင်း ရပ်ဆိုင်းထားမှုကနေ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့...
ကင်တပ်ကီပြည်နယ်၊ ဘိုလင်းဂရင်းမြို့၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပွဲတော် မြန်မာများဆင်နွှဲ မိုးမခမိတ်ဆွေ (ဘိုလင်းဂရင်း) အောက်တိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၈၊ စနေနေ့၊ မနက်ခင်းက ညနေအထိ မြို့နလယ်၊ ဆပ်ကပ်ပန်းခြံ (Circus Squire Park)...